Wese munhu anoziva kuti Internet nhasi inounza kutyisidzira kwakawanda kune vashandisi veazvino masystem emakomputa. Kubva ipapo kunouya mavhairusi nehonye, ​​vanokiya mazwi uye vashambadziri, vasori, uye kunyangwe mabrowser vapambi. Pane imwe yeiyi ...
Laptop yemitambo isingadhuri ipfungwa isina mitsara yakajeka uye yakajeka, nekuti chero mutengesi muchitoro anonyanya kufarira purofiti yake achati ichi ndicho chakanyanya ...
Kuchengetedzwa kwemakomputa inyaya yakaoma. Uye vashoma vevashandisi vanokwanisa kukurumidza uye nemazvo kupa maitiro aya kune yavo yekushandisa system. Kazhinji, pane mamiriro ezvinhu umo komputa inotapukirwa nemavhairasi. ...
Iyo AMD A8-6410 ndeye quad-core processor yakagadzirirwa zvakanyanya mabhuku emabhajeti. Codename yechigadzirwa ichi ndiBeema. Iyo AMD A8-6410 CPU ine hunhu hunotevera: iyo yekupisa package inopihwa 15 W, zvakananga ...
Kugadzira uye kugadzirisa iyo "Minecraft" server: nhanho nhanho mirairo
Iye zvino vateveri vazhinji vanofarira kwazvo kumisikidza iyo "Minecraft" server, nekuti havazi vese vanogona kuzviita kekutanga. Iko pano apa kune yakadzama mirairo uye matambudziko akakosha anomuka mune mazhinji ...
Iko kushanda kwemakomputa emagetsi ekugadzirisa dhata kwave danho rakakosha mukugadzirisa masystem ekuronga uye ekuronga. Asi nzira iyi yekuunganidza nekugadzirisa ruzivo yakati siyanei neyakajairika, saka inoda shanduko ...
Asus X200MA - Yakadzama Ongororo
Chimbofunga laptop yemazuva ano inonzi Asus X200M. Ichi chishandiso chidiki uye zvakareruka chaizvo muhuremu. Zvinoenderana nehunyanzvi hwayo, chishandiso chinogona kuverengerwa seyakagadzirwa laptop. Yakashongedzerwa neAsus X200M ...
Kutaura kuti mumitambo yeGTA akateedzana mapurisa anopa mutambi zvakawanda zvekusagadzikana ndezvekutaura chinhu. Mapurisa anogara achidzora migwagwa yese, vanochengeta runyararo, uye kana ukadaro ...
Mamwe mapurojekiti emitambo ari kuwedzera kukwezva kutarisisa kwevashandisi venzvimbo dzekudyidzana. Parizvino, pane akati wandei mafomu akadaro, uye dzimwe nguva zvinonetsa kusarudza kuti ndeipi yekutanga nayo. Nhasi tichaongorora ...
Maitiro ekuita musungo muMinecraft uye chingave chii?
Vazhinji vatambi havakwanise kunzwisisa kuti ndeipi misungo iri muMinecraft. Ivo vanotsvaga ese mabikirwo aripo, asi hapana chavakawana chakadai. Muchokwadi, hapana chinogona kuwanikwa. Mushure mezvose, musungo ...
Kudzidzira kunoratidza kuti mukana wekudiwa kwekubatanidza hard drive yeimwe yemacomputer zvishandiso kune laputopu kana kuzadzikiswa kweiyo yakatarisana yekubatanidza mamiriro kwakanyanya zvisingaite. Chiitiko cheizvi chinogona kuitika kamwe kamwe kana zvakasikwa ...
Ndinoita sei kutenderera zvinhu muSims 4? Ndinoita sei kutenderera zvinhu muSims 4?
Hazvigoneki kuti izvozvi unogona kuwana munhu asingazive kuti mutambo weiyo "Sims" akateedzana unomiririra pachayo. Iyi simulator yehupenyu iyo inokutendera iwe kuyedza pane basa remumwe munhu, raramira ...
Iwo maPole kubva kuCD Project anonakidzwa nechikwereti chakakura chekuvimba kubva kuvatambi vanobva pasirese pasirese, izvo zvisingawanikwe kumakambani ese. Nhasi, mumatumbu eiyo studio, basa riri mukutenderera zvizere pachikamu chekupedzisira chenyaya ...
Ndekupi kwekuchera muunganidzwa muZombie Farm? Zombie Farm: Chikoro Unganidzo
Munguva pfupi yapfuura, mitambo yemakomputa yakavakirwa pasocial network yakawana mukurumbira wakakura. Izvi zvinoreva kuti ivo havadi kurodha pasi mutengi, asi kunyoreswa pasocial network, kwaunogona gare gare ...
Kupfuura kwe "Kubvisa" mu "Warface": matipi, zvakavanzika
Multiplayer mitambo yemakomputa kazhinji haina zano, ivo vanonyanya kuitirwa mweya wechikwata, pamhepo yenharaunda pamwe nevabatsiri uye kukwikwidzana nevanopikisa. Naizvozvo, munzira dzakawanda, mitambo yakadaro inobhadhara ...
A rootkit is ... Zvirongwa zvekubvisa midzi. Kaspersky Anti-Virus
Utachiona hwecomputer hunogona kunzi chirongwa chinoshanda chinyararire uye chinokuvadza iyo sisitimu kana chimwe chikamu chayo. Wese wechipiri programmer aisangana nedambudziko iri. Hapana kana mumwe akasara ...
Nzira yekuita sei Yandex yekutsvaga injini?
Mumatanho ekutanga ekugona "Internet sainzi", zvinonetsa kwazvo kumushandisi wekutanga. Zvakadaro, pane zvakawanda zvitsva zvinhu ... Semutemo, wekutanga anoshandisa iyo Internet Explorer yakabatanidzwa mune yekushandisa system. Kubva panguva iyoyo zvichienda ...
Kudzokorora muMinecraft: kugadzira uye kushandisa
Vatambi veNovice vanogona kunge vasingazive izvi, asi Minecraft ine huwandu hwakawanda hwenzira dzakasiyana, imwe neimwe yakasarudzika uye iine basa rayo. Zvakare, nzira zhinji dzinoshandiswa uye kwete ...
Mushure mekuvhura bhurawuza, chinhu chekutanga chinoonekwa nemushandisi peji rekutanga. Kero yayo yakanyoreswa mumasetingi. Yese chirongwa chakagadzirirwa kubhurawuza nzvimbo dzeInternet chine basa rakadai. Izvi zvinonyanya kukosha kwevashandisi. ...
Munguva yedu, masisitimu ekutaurirana ari kusimukira nekukurumidza - zvakaoma kufungidzira kuti ndeipi turu yekukurukurirana paInternet ichave iri kudiwa, semuenzaniso, mugore Chimwe chinhu chakafanana chakaitika neICQ - kamwe ...
Mibvunzo ye65 mu database yakagadzirwa mu 1,060 masekondi.